Huawei na-enweta nkwekọrịta ọnwa atọ rue August 19 | Gam akporosis
Cegha ọnwa atọ megide Huawei
Ikpe Huawei na United States na-adịbeghị anya bụ ihe ịtụnanya, ọ bụ ezie na, n'ụzọ ụfọdụ, echere ya. Ma nke ahụ bụ eziokwu ahụ ugbu a amachibidoro gị iji gam akporoNa mkpokọta ya otu a, ọ dara dịka bọket mmiri oyi na ụlọ ọrụ ndị China.
Nke a, ihe karịrị ego enyere Huawei aka, dị ka nri si n'aka Donald Trump gaa gọọmentị China. Agbanyeghị, Huawei nwere ike were ezumike ọnwa atọ (rue August 19) n'etiti ihe a niile, dịka mba America enyela ya oge a na ikikere nwa oge ịga n'ihu na arụmọrụ ya na ikike ya.
Huawei na-anata ikike ịrụ ọrụ nwa oge ruo mgbe Ọgọstụ 19
E nyela Huawei obere obere ọrụDika Ngalaba Azụmaahịa US ga-enye gị ohere ịzụrụ ngwaahịa ndị US mere iji jigide netwọkụ dị ugbu a wee nye mmelite ngwanrọ na ekwentị mkpanaaka Huawei ugbu a, ihe dị na eriri siri ike.
N'agbanyeghị nke a, usoro a egosighi na Huawei nwere ike ịzụta akụkụ na akụrụngwa sitere n'aka ndị nrụpụta US maka akụrụngwa ọhụụ na-enweghị nkwado ikike nke ajụjụ dị. N'agbanyeghị nke ahụ, maka ndị ị nwere, ị nwere ike ịga n'ihu na-ekwurịta ihe dị iche iche na ndị nrụpụta US.
Wilbur Ross, onye ode akwukwo ahia nke United States, na nkwuputa ohuru, kwuru na agwaghị ọrụ a na Huawei dị ka aka. Na ya onwe ya, ọ na-achọ inye ndị ọrụ nkwukọrịta dị iche iche nke dabere na ngwa Huawei oge iji mee ụfọdụ mgbanwe ma chọọ nhọrọ ndị ọzọ tupu ha egbochi ụlọ ọrụ China.
Kedu ihe anyị maara banyere Kirin OS, nzaghachi Huawei na mgbochi Google
N’aka nke ọzọ, Kevin Wolf, onye ọkaiwu na onye na-arụbu ọrụ na ngalaba na-ahụ maka Azụmaahịa na United States, gwara Reuters nke na-esote:
“Ebumnuche ahụ yiri ka ọ ga-ejedebe mmetụta ndị a na-atụghị anya ya na ndị ọzọ na-eji ngwa ma ọ bụ usoro Huawei. O yiri ka ha na-anwa igbochi ọpụpụ netwọkụ. "
Ọzọkwa, n'oge a, Huawei ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ ihe otu, dị nnọọ ka ọ na-eme n'oge a niile. Nke a pụtara na ọ ga-aga n'ihu iziga mmelite na ngwaọrụ ma nwee mmekọrịta na Google na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, dị ka Qualcomm na Intel.
Akwụkwọ ikike a ewepụtara n'oge na-adịbeghị anya maka nyocha ọhaneze, na-ebelata mmachi gọọmentị US tinyere izu gara aga na Huawei Technologies Co Ltd. maka ịzụta ngwaahịa US, na ebumnuche nke inyere ndị ahịa dị ugbu a aka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Cegha ọnwa atọ megide Huawei
Xiaomi Mi MIX 3 5G rutere na Spain na nzuzo
Googlefọdụ Google Pixel 3a na 3a XL na-enwe nsogbu na ịmalitegharị